Ungcoliseko lwaseParis luyingozi njengomsi wecuba | Ukuhlaziywa okuluhlaza
NgoDisemba 13, 2013, izitalato ze EParis zazingcoliswe njengegumbi eliziimitha-20 zesikwere elinabantu abatshayayo abasibhozo. Inkunzi yayihamba ngesiqendu se ngco liseko Ixinene kakhulu, ngenxa yezithuthi ezindleleni, ukufudumeza kunye nemisebenzi yoshishino. Ngo-18: 6 emva kwemini, isibhakabhaka sivelisa izigidi ezi-XNUMX amasuntswana kulungile ilitha nganye yomoya, amaxesha angama-30 ngaphezu kwesiqhelo. Umoya weparisian wawufana nalowo we ukutshaya isixando sokwenzela.
Ezi datha zingashicilelwanga zenziwa esidlangalaleni ngoMvulo, nge-24 kaNovemba, kwaye zafunyanwa zibulela kwibhola yaseParis, efakwe epakini Andrew Citroen, kwiSithili 15, sikwazi ukulinganisa ngokuqhubekayo nanoparticles zikhona emoyeni. Ezi amasuntswana ultrafine, Ububanzi obungaphantsi kwe-0,1 microns, buyingozi kakhulu kwimpilo yabantu, kuba bungena nzulu emiphungeni, bangene ukuhamba isanguine kwaye banokufikelela kwizitya zentliziyo.
Fina o ultrafine, la masuntswana ahlelwa ukusukela ngo-2012 yi-World Health Organisation (WHO), njenge-carcinogenic (lung, bladder). Oku kunokubangela izifo yentliziyo kunye nesifuba. Banempembelelo ekuzalweni kwaye babeka abasetyhini abakhulelweyo emngciphekweni omkhulu wokuzala abantwana abanobunzima bokuzalwa. Inkqubo ye- WHO uqikelela ukuba ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zabantu emhlabeni wonke bayafa minyaka le ngenxa yokuphefumla amasuntswana kulungile emoyeni, ngenxa ye- ngco liseko esesibhakabhakeni kwihlabathi liphela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Faka co2 » Ungcoliseko lwaseParis luyingozi njengomsi wecuba
Inkqubo entsha yohlaziyo yokupholisa izakhiwo ngaphandle komoya